ကစားမလားနားမလား (vocabulary lesson) - Myanmar Network
ကစားမလားနားမလား (vocabulary lesson)
Posted by Soe Soe Win on January 26, 2015 at 13:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ခရစ်စမတ် အားလပ်ရက်ရှည်ကြီးလည်း ပြီးခဲ့ပြီ။ နှစ်သစ်လည်းကူးခဲ့ပြီ။ ဆောင်းရာသီ အားလပ်ရက်ဆိုတာ သာယာတဲ့ ရာသီဥတုလေးနဲ့ အတူခရီးသွားသူသွား၊ အိမ်မှာဘဲ အေးအေးလူလူ စာလေးဖတ်လိုက်၊ အိပ်လိုက် ရုပ်ရှင်လေးဘာလေး ကြည့်လိုက်၊ ဟိုနားဒီနားသွားလိုက်နဲ့ ဘာပူပင် သောကမှ ရှိမနေဘဲပေါ့ပါးလွတ်လပ် နေခဲ့ကြတယ်။ ဒီလို အားလပ်ရက်တွေကို ဘယ်တော့မှ မကုန်စေ ချင် ဘူးနော်။ အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာသုံးစွဲနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အားလပ်ရက်အကြောင်းပြောရင် holiday တို့ vacation တို့ စတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မကင်းပါဘူး။ ဒီတော့ အဲ့ဒီစကားလုံး ၂ လုံးကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးရသလဲဆိုတာ ဗဟုသုတရအောင် ပြောပြချင်ပါတယ်။
‘Holiday’ ဆိုတာ British English ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကျောင်းအားလပ်ရက် သို့မဟုတ် အလုပ်အားလပ်ရက် (ရုံးအားလပ်ရက်) ကိုပြောချင်ရင် ‘the holiday’ သို့မဟုတ် ‘the holidays’ လို့ ပြောရပါတယ်။ သာမာန်အားလပ်ရက် အဖြစ် ဖေါ်ညွှန်းရာမှာ (အားလပ်ရက် ၁ ရက်ကနေပြီး ၁ ရက်ထက်ပိုတဲ့ ကာလကို) the holiday လို့ ပြောပါတယ်။ Holidays လို့ ‘s’ ထည့်ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန် နှစ်စဉ် ဖြစ်တတ်တဲ့ အားလပ်ရက်တွေ (ဥပမာ - သင်္ကြန်အားလပ်ရက်) ကိုတော့ ‘the holidays’ လို့ plural form နဲ့ ပြောရပါတယ်။
အထက်က ဥပမာတွေမှာ ပထမဟာကတော့ သာမာန် အားလပ်ရက်ကိုပြောတာ။ ဒုတိယ ဥပမာကတော့ နှစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ အားလပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ခရစ်စမတ် အားလပ်ရက်ကိုပြောတာ ဖြစ်တယ်။ သေသေခြာခြာမှတ်မိအောင် ပြန်ရှင်းပြမယ်။ သာမာန် အားလပ်ရက် ကာလတစ်ခုကို ‘a holiday’ လို့ ပြောတယ်။
He thought that KoKo neededaholiday.
I went to Inlay lake foraholiday.
နှစ်စဉ်ပုံမှန် ဖြစ်ပေါ်နေကြအားလပ်ရက်ကို holidays လို့ plural form နဲ့ ပြောရတယ်။
ဒီမှာ သတိပြုဖို့ကတော့ holiday တို့ holidays တို့ကိုပြောရင် အရှေ့မှာ determiner (a/the) တုိ့ possessive (his/your/my) တို့ ထည့်ကိုထည့်ပြောရမယ်။ မမေ့နဲ့နော်။ အပေါ်က ဥပမာတွေကို သတိထားပြီး ပြန်ကြည့်ပါ။
“I need holiday.” တို့ “I went to Bangkok for holiday.” တို့ စသဖြင့် determiner မထည့်ဘဲမပြောရဘူးနော်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ preposition “on” နဲ့ တွဲပြောရတဲ့ “on holiday” ပါ။ ကျောင်းစာလုပ်စရာမလို၊ အလုပ်လုပ်စရာမလိုဘဲ ကျောင်းအားလပ်ရက်၊ ရုံးအားလပ်ရက်ကို enjoy လုပ်နေတယ် ဆိုတာကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Remember to turn off the gas when you are on holiday.
The doctor is not here today. He is on holiday.
အမေရိကန်တွေက အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်ကို ‘holiday’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ- လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ ပြည်ထောင်စုနေ့ လိုမျိုးအထိမ်းအမှတ် ရုံးပိတ်ရက် တစ်ရက်ကိုဆိုလိုတာပေါ့။ အဲ့ဒီနေ့မျိုးတွေကို British English မှာတော့ ‘bank holiday’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ holiday ကတော့ British English မှာ common ဖြစ်တဲ့ စကားလုံးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အခုအမေရိကန်တွေကဘယ်လိုပြောသလဲ ကြည့်ရအောင်။ သူတို့ကတော့ ကျောင်းပိတ်ရက်၊ ရုံးအားလပ်ရက် ကာလရှည် သို့မဟုတ် ကာလတစ်ခုကို vacation လို့ ခေါ်ပါတယ်။
We went on vacation to Inlay lake.
Vacation ကို အင်္ဂလိပ်တွေက /ဗက်ကေးရှင်း/ လို့ အသံထွက်ပြီး၊ အမေရိကန်တွေက /ဗေကေးရှင်း/ လို့ အသံထွက် ပါတယ်။ Vacation ကို verb အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်။ အားလပ်ရက် ခရီးထွက်နေတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။
Smiths vacationed in Spain last year.
ဒီတော့ အားလပ်ရက် ထွက်သူတွေကို vacationer လို့ ခေါ်ပါတယ်။
The Mandalay palace is full of sightseers and vacationers during this time.
ဒါပေမဲ့ British English မှာတော့ vacation ကို တက္ကသိုလ်ကောလိပ် အားလပ်ရက် အနေနဲ့ တစ်မျိုးတည်းသုံးတယ်။ ဥပမာ - နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် Summer vacation ပေါ့။
During his summer vacation he visited his parents in Singapore.
I've gotalot of reading to do over the vacation.
စကားပြော conversation တွေမှာတော့ ဗြိတိသျှကောလိပ် ကျောင်းသားတွေကကျောင်းပိတ်ရက်ကို ‘vac’ လို့ ပြောကြပါတယ်။
COLLINS COBUILD ENGLISH USAGE နှင့် COLLINS COBUILD ENGLISH DICTIONARY စာအုပ်တို့မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။